Archives fitsanganana amin'ny maty - Sword Cross sy Crown
Ianao Version Bible
mitoera filazantsara hafa Jesosy hafa Malagasy fanomboana fiainana mandrakizay finoana filazantsara diso mpaminany sandoka mpampianatra sandoka fahafahana voankazo Andriamanitra filazantsara fahasoavana fitokoana Mpisoronabe Fanahy masina Islam Jesosy Jesoa Kristy Jiosy Joseph Smith fanjakana lalàna fiainana Light Mormona Muhammad New Age Fanekena vaovao fisoronana faminaniana filazantsara miroborobo fanavotana fitsanganana amin'ny maty fahamarinana sorona famonjena fanamasinana tsy misy Fanahy fahamarinana asa izao tontolo izao
Homefitsanganana amin'ny maty
Iza no tadiavinao?
Aprily 9, 2019 sklindsey
Iza no tadiavinao? Nankany am-pasana i Maria Magdalena rehefa napetraka tamin'ny hazo fijaliana i Jesoa. Rehefa avy nahatsapa fa tsy teo ny vatany dia nihazakazaka ary nilaza tamin'ny mpianatra hafa. Rehefa tonga izy ireo [...]
Ny Fahagagana amin'ny Fasana tsy misy dikany
March 20, 2019 sklindsey
Ny Fahagagana tamin'ny fasana foana Jesosy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, saingy tsy izany no nifarana. Mitohy ny kaonty filazantsara ara-tantara nataon'i John - “Ary tamin'ny andro voalohan'ny herinandro dia lasa i Maria Magdalena [...]
Moa ve misotro avy amin'ny loharanon'ny rano velona ianao, na amin'ny fanandevozana amin'ny lavadrano tsy misy rano?
Aprily 25, 2018 sklindsey
Moa ve misotro avy amin'ny loharanon'ny rano velona ianao, na amin'ny fanandevozana amin'ny lavadrano tsy misy rano? Taorian'ny nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianany ny Fanahin'ny fahamarinana fa halefany ho azy ireo Izy, dia [...]
Iza no atokisanao ny mandrakizay ho anao?
Aogositra 12, 2017 sklindsey
Iza no hatokisanao ny mandrakizay? Hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: “'Tsy hamela anareo ho kamboty aho; Ho any aminao aho. Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao, [...]
Ny mpaminany sandoka dia mety milaza ny fahafatesana, fa i Jesosy irery ihany no afaka milaza ny fiainana
Septambra 22, 2016 sklindsey
Ny mpaminany sandoka dia mety hanonona ny fahafatesana, fa i Jesosy irery ihany no afaka manonona ny fiainana Taorian'ny nanambaran'i Jesosy tamin'i Marta fa Izy no fitsanganana amin'ny maty sy fiainana; mitohy ny firaketana ara-tantara - “Hoy izy taminy: 'Eny, Tompoko, [...]
Efa nivoaka ny aloky ny lalàna ve ianao ka lasa tena zava-misy ao amin'ny Testamenta Vaovao momba ny fahasoavana?
Jesosy dia any an-danitra anio manelanelana ho antsika…
Ny fanekena vaovao voatahy
Jesosy irery ihany no manome antsika fahalalahana amin'ny fanandevozana mandrakizay sy ny fanandevozan'ny ota…
Ron Rhodes - Fahasamihafana amin'ny Mormona sy ny Kristianisma
Izahay dia tranokala mpivarotra Amazon Affiliates. Ny minisiteranay dia mahazo ny isan-jaton'ny vidin'ny fividianana ireo boky izay novidiana tamin'ny alàlan'ity tranonkala ity avy any Amazon.
Resadresaka ifanaovana amin'ny mpanaraka an'i QAnon teo aloha Aogositra 27, 2021
Mainty sy fotsy ny fankahalana amin'ny Internet Aogositra 2, 2021
"Rise of the Moors" dia kofehy noforonina avy amin'ny vondrona hafa Jolay 10, 2021
Tatitra momba an'i Steve Hassan “Crusade” Jona 3, 2021
Steve Hassan, ilay maodely BITE ary Donald Trump Enga anie 19, 2021
Fianakaviana noviravirain'ny fombam-pivavahana "vavahadin'ny lanitra" Enga anie 17, 2021
Inona ny lova navelan'i Ole Anthony? Aprily 19, 2021
Nampiakarina tao amin'ny “vavahadin'ny lanitra” ve ireo zaza tsy ampy taona? Aprily 13, 2021
Taratasy misokatra ho an'ny mpitarika ny "kolo voa" David McKay March 25, 2021
Famerenana ny boky: “Aleo noho ny fonja Tiorka: Ny zavatra nianarako tamin'ny fiainana ao amin'ny sekta ara-pinoana” March 22, 2021